दोहोरो जिम्मेवारीले थिचेको दिनचर्या |
दोहोरो जिम्मेवारीले थिचेको दिनचर्या
प्रकाशित मिति :2016-02-20 11:00:46
कहिले काँही मेरो श्रीमान र ममा के फरक छ भनी सोच्छु । उ रातदिन आफ्नो कामलाई मात्र प्राथमिकता दिने त्यसैमा लागिरहेन । एउटै काममा ध्यान दिएपछि कामपनि पूर्ण र स्तरिय हुँदो रहेछ । मैले घरको काम पनि भ्याउनु पर्ने र आफ्नो जिम्मेवारी पनि पुरा गर्नुपर्ने।
पाँच वर्षको मेरो छोराले प्रत्येक छाक आज के तरकारी छ ममी भन्ने प्रश्न गर्न छोड्दैन । जे पाकेको छ त्यही भन्नुपर्यो । छोरालाई मन परेको तरकारी छ भने ‘वाउ टेस्टी यम्मी’ भन्ने । मन परेको छैन भने ‘छि म त यस्तो खान्न त्यस्तो खान्न’ । तरकारी के पकाउँ भन्ने चिन्ता आमालाई कति हुन्छ भन्ने त्यो वच्चालाई के थाहा । चिन्ताका विच जसोतसो तरकारी पाक्छ । केही समयका लागि तरकारीको चिन्ता सकियो । अर्को चिन्ता शुरु समाचार के लेख्ने ……वाफरे तनाव ।
आफूलाई चाहिने सूचनाका लागि सम्वन्धित ठाँउमा फोन नम्वर डायल गर्यो । भनेको वेला फोन लागे र सूचना पाए भाग्यमानी । धेरै ठाँउमा त एक घण्टापछि गर्नोस्, सम्वन्धित व्यक्ति छैन, भोली गर्नोस आदीमै समय वित्छ । एक घण्टापछि फोन गर्यौ । फेरी जवाफ त्यही आउँछ । सानो सूचनाले अड्किएर महत्वपूर्ण र विशेष समाचार त्यतीकै अड्किन्छन् ।
यातायात पुग्ने नजिकैका छिमेकी जिल्ला त पुगौंला, सुनसरी आसपासका क्षेत्रमा भएका महिला सम्बन्धि ठूला र महत्वपुर्ण कार्यक्रमका समाचारका लागि ठाउमै पुगिएपनि टाढाका जिल्लामा पुग्न कठिन छ । टेलीफोनको भरमा क्षेत्र कभर गर्नुपर्ने मेरो वाध्यता भनि साध्य छैन । सानो सानो समाचार त टेलीफोनको भरमा पनि हुन्छ, तर ठुला र महत्वपूर्ण समाचारका लागि त सो ठाँउमा पुग्नै पर्‍यो । त्यहाँ पुग्दासम्मको मेहेनत र खर्च सम्झदा कहिले काँही आफ्नो जिम्मेवारी प्रति वितृष्णा नै जाग्छ । आफूले मासिक रुपमा पाउने तलव फोन खर्च र यातायातमै सकिँदा मन अमिलो हुने नै भो ।
केही महिना अघि एउटा समाचारको लागि एउटा संस्थामा फोन गर्दा त्यहाँका हाकिम सावले घरी कम्प्यूटर अपरेटर छैन, घरी कम्प्यूटर विग्रियो, घरी म अफिस वाहिर छु भनेर एक हप्तासम्म अलमल्याए । समाचार नपठाउँ सम्पादकले जसरी पनि पठाउनु पर्छ भन्ने, पठाउँ यसरी नै हाकिमले अलमल्याईरहने । अन्त्यमा केही सीप नलागेपछि एकजना भाईलाई लिएर तीनघण्टाको वाईक यात्रामा निस्किएँ । जानुअघि हाकिम साव हुनुहुन्छ हुनुहुन्न भनी निश्चित गरें । उहाँ अफिसमै भएको जानकारी पाएपछि वर्खाको समय पानीमा रुझ्दै हामी सम्वन्धित स्थानमा पुग्यौं ।
हामी पुग्दा हाकिम साव अफिसमै हुनुहुँदो रहेछ । हामीले अभिवादन टक्र्यायौं र आफ्नो परिचय दियौं । धन्न हाकिम सावले परिचय पत्र मागेनन् । उनले फोनमा अलमल्याएको देख्दा त त्यो पनि माग्लानकी भन्ने पीर थियो । मागिहाले के गर्ने, परिचयपत्र ल्याउन विर्सेछु । मनमनै विकल्प निकालें यी वुज्रुक महासयले विश्वास गरेनन् भने डाईरेक्ट सम्पादक ज्यूसँग टेलीफोन वार्ता गराउँने । तर, यो सवको जरुरत परेन ।
उहाँलाई मैले टेलीफोन गर्ने मान्छे मै हो भनेपछि बल्ल आफ्नो समस्या वताएँ । पहिले पनि एकदुईजना पत्रकारले संस्थाको आचारसंहितालाई वेवास्ता गर्दै संस्थाले गरेको काम प्रकाशन गरिदिएका रहेछन् । त्यसले गर्दा संस्थाप्रति सेवाग्राही सशंकित हुँदारहेछन् । हाकिम सावले आफ्नो वाध्यता वताए । मैले त संस्थाको आचारसंहितालाई आँचपुग्ने खालको सूचना तथा तथ्यांक मागेकी त थिईन् । तर, पनि मलाई सानो सूचनाका लागि त्यहाँसम्म पुग्न वाध्य वनाए ।
उनले आफ्नो सहयोगीलाई मैले मागेको सूचना दिन लगाएर आफू अर्कै काममा लागे । केही समयमै हाकिम सावकी सहयोगीले मलाई आवश्यक पर्ने सूचना दिईन् । त्यति गर्दैमा झण्डै चार वज्न लाग्यो । तीनघण्टाको वाइक यात्रा फेरी शुरु भो । सिमसिमे पानीमा रुझ्दै सात वजेतिर घर पुगियो । दिउँसो खाजासम्म खान फुर्सद नपाएका हामी भोकले रन्थनिएका थियौं । लखतरान भएर घर त पुगियो । घरको लठिपत्र देखेर झन् धेरै थकित भएँ । दिउँसो घर छोड्दा सबै ठिकठाक भएका सामान त वाफरे भनिसक्नु छैन । यताको सामान उता ! उताको सामान कताकता ! श्रीमान पनि पत्रकार भएकाले घर आईपुगेका थिएनन् ।
जति नै थाकेपनि खाना आफैँ पकाउनु पर्ने मेरो वाध्यता । कपडा फेरफार गरेर किचन छिर्दा झण्डै आठ वजी सकेछ । हतार हतार दाल चामल तयार पारेर ग्याँसमा राख्न नपाउदै दिउँसो आफन्तको जिम्मामा छोडेको छोरो दौडदै आईपुग्यो । ‘किन ढिलो आउनुभएको’ भन्ने छोरोको प्रश्नको उत्तर दिन नपाउँदै अर्को प्रश्न तेर्साइ हाल्यो, ‘ममी अहिले के को तरकारी………..?’ मैले केही जवाफ दिईनँ । विहान वेलुकी तरकारी के पकाउँ र दिउँसो के समाचार लेखौं भन्ने चिन्तामा वितेको मेरो दैनिकी श्रीमानले त वुझ्न सकेका छैनन् त्यो ५ वर्षे वच्चाले के वुझ्थ्यो ।
कहिले काँही मेरो श्रीमान र ममा के फरक छ भनी सोच्छु । उ रातदिन आफ्नो कामलाई मात्र प्राथमिकता दिने त्यसैमा लागिरहेन । एउटै काममा ध्यान दिएपछि कामपनि पूर्ण र स्तरिय हुँदो रहेछ । मैले घरको काम पनि भ्याउनु पर्ने र आफ्नो जिम्मेवारी पनि पुरा गर्नुपर्ने । दोहोरो भूमिकाले थिचिएकी मलाई विहान कतिवेला घरधन्दा सकाएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरौं र पुन वेलुकी कतिखेर घरधन्दा पुरा गराैं भनि रुमल्लिरहँदा आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण र स्तरिय हुनसकेको छैन । त्यसैले उ वरिष्ठ र म सामान्य पत्रकार हुँ भनी मुल्यांकन गरिन्छ । मेरो आफ्नै दावी छ रातदिन यहि काममा लाग्ने वातावरण मिलेमा म पनि वरिष्ठ हुन सक्छु । तर, म महिला भएकोले त्यही काममा मात्र लागिपर्ने छुट मलाई छैन ।
परिवार र साथीभाईले वारम्वार एउटै कुरा दोहोर्याईरहन्छ । तिमी र तिम्रो श्रीमान वरावरी छौ । तिमीहरूको भूमिका पनि वरावर । तिमी पनि पत्रकार उ पनि पत्रकार । हामीलाई वरावर देख्ने समाज र परिवारले मेरो भूमिका र मेरो श्रीमानको भूमिका फरक छ भनेर कहिल्यै देखेन ।
पत्रकारको रुपमा हाम्रो भूमिका वरावर हो ।
उसले पनि समाचार लेख्ने हो मैले पनि समाचारै लेख्ने हो । तर, मेरो चाही दोहोरो भूमिका छ । दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्दा मैले कति तनाव वेर्होनुपर्छ भन्ने चाहीँ उनीहरूले कहिले देखेनन् । घरको कामलाई मूल्यांकन नगर्ने यो समाज र परिवारको मानसिकताले कहिलेकाँही रोजगारी पनि वोझ नै लाग्छ ।
सम्पादन गरिएको *दैनिकी